Aaway ciyaarihii cusbaa ee Apple Arcade? | Waxaan ka socdaa mac
Aaway ciyaarihii cusbaa ee Apple Arcade?
Way cadahay in ciyaaraha Apple aysan ahayn kuwo saaxiibtinimo leh oo in muddo ah shirkadda Cupertino kuma soo kordhineyso ciyaaro barnaamijkeeda Apple Arcade. Dareenkan Bishii Abriil 2, shirkaddu waxay soo saartay ciyaaro cusub oo isdaba joog ah tan iyo markaasna wax dheeraad ah ma soo kordhin.
Maalintaas shirkadda Cupertino waxay ku dhawaaqday in Apple Arcade uu ku dari doono 30 ciyaarood oo cusub adeegga waana sida loo qabtay., helitaanka wadar ahaan ku saabsan 180 kulan. Laakiin tan iyo markaas istiraatiijiyadda Apple ee adeeggan Apple Arcade waxay umuuqataa mid fadhiid ah inkasta oo ay kor uqaadeyso dhowr ciyaarood oo cusub sida "Coming Soon" si rasmi ah uma yimaadaan.
Waxaa macquul ah in bilahaan kadib dhaqdhaqaaq la’aan wararka ay dib u bilaaban doonaan berri
Laga bilaabo Jimcaha Juun 4, ‌Apple Arcade‌ waxaa lafilayaa inuu dib u bilaabo imaatinka ciyaaraha cusub ee adeega mudadaas ka dib taas oo aanaan arag wax war ah. Tani waa uguyaraan waxa ay ka faalloodaan shabakadda caanka ah MacRumors.
In Bogga internetka ee Apple Waxay noo sheegaan inay usbuuc walba ku daraan ciyaaro laakiin tani runti maahan kiiska maadaama kiiskan aan maqalnay in muddo ah in kasta oo ay xaqiiqadu tahay imaatinka ciyaarta waxaa lagu sheegay: Kali, Inks, Frenzic Waqtiga Dheer ama Halyeeyada Boqortooyada Rush iyo kuwa kale ...
Apple Arcade wuxuu sii daayaa cinwaanno cusub iyo cusbooneysiin kooban toddobaad kasta. Waxaad ku arki kartaa sii-deynta soo socota qaybta Imaatinka Dhawaan ee tabka Arcade ee App Store.
Adeegan socodsiinta ciyaarta ayaa si rasmi ah loo bilaabay sanadkii hore 2019 iyo waxay umuuqataa inaysan runti guulo badan kahelin dadka isticmaala loogu talagalay Mac, iPhone, iPad, iPod taabashada, Apple TV iyo Mac oo ah 4,99 euro bishii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ciyaaraha » Aaway ciyaarihii cusbaa ee Apple Arcade?
16-inch ee soo socota ee 'MacBook Pros' ayaa laga helay keydka nidaaminta Shiinaha
Taxanaha La Costa de los Mosquitos ayaa dib loo cusbooneysiiyay xilli ciyaareedkii labaad